🥇 uphendlo-mali nolawulo lwabasebenzi
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 166
Ividiyo yocwangciso-mali nolawulo lwabasebenzi
Uku-odola ingxelo kunye nolawulo lwabasebenzi
Ulawulo lokunikwa kwengxelo lwabasebenzi luya kwenziwa ngokufanelekileyo nangokucocekileyo kwinkqubo ye-USU yeSoftware ephuhliswe ziingcali zethu eziphambili. Ngokwengxelo yabasebenzi kunye nolawulo, kuyafuneka ukuba kusetyenzwe ngemisebenzi emininzi efumanekayo kwindawo yogcino lweSoftware yeUSU, idale ukuveliswa kwamaxwebhu okuzenzekelayo kwayo nayiphi na indlela kunye nomxholo. Ngokumalunga nokubalwa kwabasebenzi kulawulo, uncedwa kakhulu lithemba lokuzisa amanye amathuba kwinkqubo yokujonga inkqubo ye-USU Software. Abasebenzi abakhoyo endaweni yabo bathathe indawo yabasebenzi babo emva kokudluliselwa kwifomathi ekude yokwenza imisebenzi ngokunxulumene nemeko yeengxaki kwilizwe kunye nehlabathi. Imeko yangoku ikhubazeke kakhulu kuwo onke amacandelo eshishini, ingashiyi thuba ngokweendidi zamashishini amancinci naphakathi ukuze aphile. Imeko yesifo sele ibaluleke kakhulu ngokwehla kwezoqoqosho kweenkampani ezingakhange zikwazi ukulungiselela ingxowa-mali yokugcina imali ukuze ikwazi ukusinda kwixesha elinzima ngokokutsho komntu wonke. Iinkampani ezifumene uninzi ngabasandula ukufika ababesandula ukuqala uphuhliso kwaye bengenalo oovimba bezemali phantsi kwabo kwimeko kaxakeka elizweni nakwihlabathi. Umxholo wezopolitiko wokuxhasa oosomashishini, amabango abo awileyo kunye nenqanaba lokudinga uluntu lihle kakhulu, kwaxoxwa kwihlabathi liphela, ingeyiyo eyona nto iphambili kwicandelo lomsebenzi. Kolu nxibelelwano, ugxininiso ekufumaneni indlela yokuphuma lwehle ekunciphiseni iindleko kubuncinci kwaye iinkampani zitshintshela kwindlela yokusebenza ekude. Kwiinkampani ezininzi, oku kuguquka kweziganeko yayilusindiso lokwenyani, njengoko kwavela ukulungisa inzuzo, ukunciphisa iindleko zokuqeshisa kunye nokusetyenziswa, kunye nokusindisa oogxa emisebenzini ngokuhambelana nokugcina ibango ngokwemveliso yezinto ezisisiseko. Ukutshintshela kwimisebenzi ekude kwabonakala kungekho lula njengoko kubonakala, kuba abasebenzi abaninzi, emva kokuba betshintshele kwimowudi ekude, baqala ukungathandabuzi ukungahoyi uxanduva lwabo lomsebenzi ngokuthe ngqo, behlisa umgangatho wentlangano. Iintloko zamashishini azinakho ukusityeshela esi siganeko sikhulu kwaye zaqala ukubhenela kwinkampani yethu ukuba zincedise ngesicelo sokwenza imisebenzi eyongezelelweyo eya kuthi incede ekulungelelaniseni izinto. Abasebenzi benkampani yethu babemamele bonke abaxumi abasondeleyo kwaye bamamela nenqwaba yeminqweno, enkosi esinokuthi siyenze kwaye siphuhlise ukusebenza okongezelelekileyo kwenkqubo ye-USU Software system yokubeka iliso kunye nokubeka iliso kubasebenzi. Kwavela ukuqokelela uluhlu oluthile lweempawu ezaye zaba lelona candelo liphambili lenkqubo yokujonga, kwaye kwafuneka ukuba kuthathelwe ingqalelo iinkampani ezinomsebenzi ongekho mgangathweni ofuna indlela ekhethekileyo kunye nokukhethwa okuneenkcukacha kokusebenza. Phambi kokuba kuqalwe ugcino-zincwadi lwabasebenzi kunye nolawulo, kubalulekile ukwazisa abasebenzi ukuba baya kubekwa esweni ngokusekwa kwengqeqesho kunye nokulandelwa komhla wokusebenza. Isiseko seSoftware ye-USU, sinoluhlu olupheleleyo lwezinto ezongezelelweyo ezinokubakho, ezinokugcina ngokusebenzayo ulawulo malunga nokugcinwa kwenkqubo yemihla ngemihla ngethemba lokwenza inani elifunekayo leeyure ngokomsebenzi. Oosomashishini banokujonga ngokucacileyo isikrini somqeshwa ngamnye kwaye babone ukuba ngubani kwaye yintoni eyenzayo ngexesha lokusebenza kwenkqubo ye-USU Software. Ulawulo lwabasebenzi kunye nolawulo lwenziwa ngokukhutshwa kwamaxesha ngamaxesha kolwazi olufunyenweyo kwindawo ekhethekileyo ekhethiweyo ngabaphathi bombutho. Uyakwazi ukuvelisa ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo iigrafu kwindawo yogcino lweedatha zeSoftware ye-USU ngokuthelekisa umsebenzi owenziwe ngabanye abantu. Ke, kunokwenzeka, ngokuchazwa kombala, ukubala ukuba ngubani onononophelo ngakumbi kwimisebenzi yakhe, kwaye ngubani oye waba ngumsebenzi okhululekile, echitha ixesha lomsebenzi kwimicimbi yobuqu. Umzobo ubonisa ubuninzi obuhlaza, obubonisa umsebenzi osebenzayo wabasebenzi bakho. Ubukho bomthubi bubonisa ukuphumla okuthile kunye nokuhamba kancinci kokuhamba komsebenzi kunye neenkqubo ezahlukeneyo zomsebenzi. Ngokubhekisele kumbala obomvu, singatsho ngokuzithemba ukuba iividiyo zobuqu, imidlalo eyahlukeneyo, kunye nezinye iinkqubo ezingamkelekanga zazisetyenziswa njengokujonga. Umbala ekuphela kwawo ongafanele ukuhoya ngawo ngumbala omfusa, ubukho bawo kwitshathi bubonisa ixesha lesidlo sasemini. Emva kokujonga le shedyuli yonke imihla, uyakwazi ukuqonda indlela abahluke ngayo bonke abasebenzi ekusebenzeni kwemisebenzi yabo ethe ngqo. Kolu nxibelelwano, uya kuba nesizathu esihle sokuqonda ukuba kwenzeka ntoni, emva kokuqhuba incoko nabasebenzi de kugxothwe abantu abafumana imali ngokungafanelekanga, behlisa imeko yezoqoqosho yombutho. Ke, uya kuba nakho ukuseka ulawulo kunye nocwangco kumbutho usebenzisa izakhono zangoku zenkqubo ye-USU yeSoftware, eya kuthi ibe liqabane lakho kunye nomncedisi ixesha elide. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nokugcinwa kwabasebenzi kunye nolawulo, ungasoloko uqhakamshelana neengcali zethu ezikhokelayo kuncedo, abanokwazi ukusombulula nawuphi na umba ophakanyiswe ngumnxeba. Usebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokujonga abasebenzi kunye nolawulo, unokwakha iqela lakho, elinabasebenzi abafanelekileyo nabanoxanduva. Nakuphi na ukuhanjiswa kwemali kuya kuba phantsi kweakhawunti kunye nolawulo lwabalawuli benkampani, abanokwazi ukujonga iingxelo kunye neencwadi zemali, ukulungisa ibhalansi yonke imihla ekuqaleni kosuku. Uyakwazi ukubonelela ngolawulo lwenkampani ngalo naluphi na uhlobo lokuhamba kwamaxwebhu, ngokuthumela nge-imeyile. Inkqubo yedatha ye-USU-Soft ulwazi olufunyenweyo kwaye luvelise idatha engenisa irhafu kunye neengxelo zeenkcukacha-manani ngekota ngokufaka kwiwebhusayithi yamaziko owiso-mthetho. Iirekhodi zabasebenzi kunye nolawulo lokunikwa kwengxelo kunceda amashishini amaninzi asinde kwixesha elinzima ngayo yonke indlela, efuna ukulawulwa rhoqo kunye nenkxaso yemali. Abaphuhlisi benkqubo ye-USU yeSoftware badala amathuba kubalo-mali kunye nokubeka esweni abasebenzi kuyo nayiphi na ifomathi kunye neenkampani ezilinganisayo ezifuna uncedo. Ukungafani kwe-freeware kulele kulungelelwaniso olulula, oluqondakalayo ngokusebenza ngaphandle koncedo lweengcali, kunye nesiseko seSoftware ye-USU ngamakhono ayo anezixhobo ezininzi eziqhuba ezona nkqubo zinzima emsebenzini. Kukho useto kwinkqubo ye-USU yeSoftware, enokulungiswa kwimeko yesidingo esingxamisekileyo ngokongeza iibhokisi zokukhangela ukwenza kunye nokukhubaza iindlela ezahlukeneyo ngokokubona kwakho. Iinkampani ezininzi, nokuba zithini inqanaba lamashishini abo, zifuna ukuseka isiseko se-IMS ngolawulo olongezelelekileyo kunye namandla okubek'esweni ngokuhamba komgangatho ophezulu kunye nokusebenza ngokufanelekileyo kwamaxwebhu. Ngotshintsho lomsebenzi ekude, isiseko somsebenzi weqela lakho siyahluka kwinkqubo ye-USU Software, enceda abasebenzi ukuba basebenzisane. Ngokuthengwa kwenkqubo ye-USU yeSoftware yenkampani yakho, uyakwazi ukugcina iirekhodi zabasebenzi kunye nokulawula umgangatho womsebenzi owenziweyo kunye nendlela yemihla ngemihla.
Kule nkqubo, uyakwazi ukwenza isiseko sabathengi bakho kunye neenkcukacha zebhanki zezinto ezisemthethweni. Kwabatyali ngohlobo lwabatyalwayo kunye nabatyalayo, uqala ukwenza amaxwebhu ukuqinisekisa isixa semali onetyala. Izivumelwano zeefomathi ezahlukeneyo kunye neenjongo ziyakwazi ukwenziwa kwifreeware kunye nolwandiso lwexesha lokusetyenziswa njengoko kufanelekile. Imali engeyiyo ikheshi kunye nekheshi ichithwa phantsi kolawulo olusondeleyo lwabaphathi.
Kwinkqubo, ugcina iirekhodi zabasebenzi zokulawula kunye nokuphendula ukuphunyezwa kweenkcazo zabo zomsebenzi ngqo. Kukho inkqubo ye-inventri enceda ekuchongeni amagama ezinto ngokwempahla kwigumbi lokugcina kunye nendawo. Usebenzisa inkqubo yokungenisa, ungaqala ngokukhawuleza ukuvelisa amaxwebhu kwindawo yogcino lwedatha entsha emva kokuhambisa okuseleyo. Ngaphambi kokuba uqale ukuvelisa amaxwebhu kwindawo yogcino lwedatha, kufuneka ufumane ukufikelela kobuqu ngendlela yokungena kunye negama lokugqitha labasebenzi abakhoyo. Ukuba nolungelelwaniso olulula nokuqondakalayo, unokufunda ngokusebenza ngokwakho ngaphandle koncedo lweengcali. Abasebenzisi bayakwazi ukwenza ukuhamba komsebenzi okuyimfuneko ngohlobo lweengxelo kwinzuzo yabathengi abaqhelekileyo.
Inguqulelo yedemo yesiseko sedatha inceda ukufundwa okukhawulezileyo kokusebenza ngaphambi kokuthenga i-freeware ephambili. Isicelo esenziweyo esiphathwayo kuwo nawuphi na umgama sinceda ukugcina iirekhodi zabasebenzi kunye nolawulo lokuthotyelwa kwemisebenzi yabo ethe ngqo.
Imiyalezo yeefomathi ezahlukeneyo yazisa ngokupheleleyo abathengi kubalo-mali lwabasebenzi njengolawulo.
Kukho ukucofa okuzenzekelayo, ngoncedo olunokwenzeka, egameni lenkampani, ukwazisa abathengi malunga nokuphathwa kwabasebenzi kunye nolawulo.
Iitheminali ezikhethekileyo ziyakwazi ukwamkela ukuhanjiswa okuhlukeneyo kwemali ebekwe kwindawo efanelekileyo esixekweni. Uyilo lwesiseko luphuhliswa ngohlobo lwangoku ukuba lunceda ukutsala inani elikhulu labantu abafuna ukuthenga i-freeware. Ukunyusa isantya sokuchwetheza ngoncedo ukubeka isikhombisi kwiinjini yokukhangela ngokufaka igama lesikhundla. Uyakwazi ukujonga ukubekwa kweliso komqeshwa ngamnye ngokuchongwa kwesimo sakhe sengqondo kuxanduva lomsebenzi wakhe ngqo. Ukuthelekisa intsebenzo yezifundo kunye nenqanaba lokusebenza phakathi kwabasebenzi kuya kuvumela umsebenzi okhethekileyo kwiziko ledatha. Isicwangciso esahlukileyo semizobo, imizobo, kunye neetafile zinokwenziwa zabasebenzi ukumisela inqanaba lokusebenza.
Kukho umsebenzi okhethekileyo wokubonakala kokubonakala, oya kukuvumela ukuba uqaphele oonobumba bokuqala bendwendwe emnyango wesakhiwo.
Kwinkqubo yokwenza imisebenzi, uqala ukufaka ulwazi olufunyenwe kwidiski ekhutshweyo kwimeko yokuvuza okanye kaxakeka. Inkqubo ikunceda uqonde nayiphi na imibuzo ngokubhekisele kulawulo lwabasebenzi kunye nolawulo, ukubanakho ukubeka esweni okwangoku Kwirhafu, abasebenzisi banokwenza ukubalwa okukhethekileyo kunye neebhonasi ezongezelelekileyo ngokwengxelo. Abalawuli bafumana imiyalezo evela kubathengi ngempendulo malunga nokusebenza kwabasebenzi kunye nomgangatho wenkonzo yabathengi.